Moscow State University - Isifundo e unviersity best of Russia
Moscow State University Yokuxhumana
isifinyezo : MGU
Wasekelwa : 1755
abafundi (ngu.) : 47000
Ungakhohlwa xoxa eMoscow State University
Bhalisa at Moscow State University
Moscow State University sikhungo endala kunawo wonke wokufundisa Russia. It yasungulwa on 12th of January 1755 ngoSuku Saint Tatyana sika at esinqumweni Empress Elizaveta Petrovna on the isinyathelo usosayensi omkhulu Russian Mikhail Vassilievich Lomonosov ngemva kwalokho bese ogama lakhe. Usuku isisekelo salo (uJan 12) lugujwa njengoba Day Student BakaJehova eRussia.
Lo mdlali oneminyaka engu 2005 ephawulwe mkhosi futhi ezingaphezu kuka 900 imicimbi ekhethekile elalinikezelwe 250 esenzeka MGU. A umtapo omusha enyuvesi, uphiko lokuqeqeshela entsha ye imithi kanye nomtholampilo enyuvesi yesimanje kugujwe lesi senzakalo esikhethekile.
Moscow State University ine a isiko eside emi umsebenzi oncomekayo academic. Ngalesi enyuvesi Russian izikole omdala futhi edume kunazo zesayensi nemfundo udumo umhlaba wonke aye amiswa. Phakathi abathweswe iziqu zayo kanye noprofesa kukhona Nobel Prize abawinile futhi ososayensi emhlabeni. Moscow State University kuhlanganisa eziningi zesayensi zocwaningo ezikhethekile ezindaweni eziphawuleka kakhulu isayensi yanamuhla efana Mechanics, Physics Nuclear, Astronomy, lasers, Yamamolekhula, Chemistry Bioorganic, Anthropology, Materials Sciences, Lemvelo, Sciences zosizo, nabanye.
Isibalo esiphelele abafundi ababhalise (kuhlanganise post-abaphothule kanye nabafundi itoho) kuyinto 40 000. Abasebenzi Lihlanganisa izinto ezingaphezu kuka 8 500 osolwazi, lihlobanisa oprofesa nabangane ucwaningo. Njengamanje inani labafundi angaphandle kanye postgraduates kuyinto 5000 kusukela 80 amazwe.
Moscow State University ine izivumelwano ne ehola nezinhlangano zamazwe ngamazwe (isib, UNESCO, The World Bank), uyilungu izinhlangano eziningi zomhlaba, futhi wasayinwa phezu 300 Izivumelwano amayunivesithi wonke amazwekazi. I Lomonosov University liyisikhungo wokubambisana phakathi amayunivesithi ensimini ezwe elaliyi-USSR.
Izazi eziningi ezivelele, Abaholi yomphakathi kanye sezwe akhethwe Honorary uProfesa kanye Doctors of the University. Phakathi kwabo kukhona J. Goethe, ethandekayo sazi German kanye nesazi, the prime-ungqongqoshe lokuqala of India Jawaharlal Nehru, uMargaret Thatcher, futhi okokugcina, Bill Clinton.
Abaholi abaningi zamanje kanye esidlule ezombusazwe, ezifana M. Gorbatchev kukhona alumni of eMoscow State University kanye underling izifiso of the nyuvesi ahlinzeke yesikole engcono kubantu best. Yingakho nje sincoma ukuba ufunde russian e univerity Moscow State.
Uma ungathanda ukuba babhalise MGU, sicela uhlole inani ikhasi lethu okuningiliziwe abafundi abalindelekile. Isabelomali wonyaka we MGU kufana ruble cishe 2bn (USD 350 million).
Faculty of yezamakhompyutha Mathematics kanye Cybernetics
Faculty of Bioengineering futhi Bioinformatics
Faculty of Isayensi Yenhlabathi
Faculty of Medicine Esiyinhloko
Faculty of ubunjiniyela ngokomzimba futhi amakhemikhali Esiyinhloko
Isikhungo Izifundo Asian Afrika
Faculty of Izilimi zangaphandle kanye Area Ucwaningo
Faculty of World Ezombusazwe
Faculty of ocolekile Buciko Bekwenta
Faculty of Izinqubo Global
School of Ukuhumusha Nokutolika
School of Audit State
Graduate School of Management Nokusungula
School of Ithelevishini
School Ephakeme wenqubomgomo e Amasiko Management e-Sphere of Humanities
Ivan Shuvalov futhi Mikhail Lomonosov baqala khona ukukhuthaza umbono wamaNyuvesi, futhi Russian Empress Elizabethdecreed kwalophiko ngo-January 25 1755. Izinkulumo sokuqala senzeka ngo-Ephreli 26. AmaRashiya namanje ukugubha Januwari 25 ngokuthi abaFundi’ Usuku.
Saint Petersburg State University futhi eMoscow State University bahlanganyele umbango friendly phezu isihloko inyuvesi lidala kunawo wonke eRussia. Nakuba eMoscow State University sihlehlela kusukela 1755, St yayo. Petersburg esincintisana aye wasebenza njalo njengoba “inyuvesi” kusukela 1819, futhi ubona ngokwaso njengoba owalandela nyuvesi esungulwe ngo-January 24, 1724, ngu isimemezelo sikaPeter Omkhulu.
Le nyuvesi ekuqaleni matasa Uthishanhloko Isitolo Zokwelapha Red Square kusuka 1755 ukuze 1787;UCatherine Omkhulu adluliselwe ukuze isakhiwo Neoclassical ngakolunye uhlangothi Mokhovaya Street. Lesi sakhiwo esikhulu kwakhiwa phakathi 1782 futhi 1793 isitayela Neo-Palladian, elaklanywa Matvei Kazakov, futhi kabusha emva 1812 Nomlilo eMoscow ngo Domenico Giliardi.
Ngekhulu le-18, eyunivesithi waba neminyango emithathu: ifilosofi, imithi, futhi umthetho. A ekolishi wokulungiselela u abasemaqenjini nyuvesi ngaphambi saqedwa ngo 1812. Ngo 1779 Mikhail Kheraskov wasungula esikoleni boarding netikhulu (ibhodi yizicukuthwane), elaba isikhungo sokuzivocavoca ngoba izikhulu Russian e 1830. I cindezela inyuvesi, run by Nikolay novikov kule 1780s, eshicilelwe ephephandabeni oyisilomo Imperial Russia - Moskovskie Vedomosti.
Ngo 1804, imfundo yezokwelapha ahlukaniselwe emitholampilo (therapy), kuhlinzwa, futhi zokubelethisa amandla. Ngo 1884-1897 uMnyango Medicine – osekelwa ngeminikelo yangasese, Ihholo lasedolobheni, futhi uhulumeni kazwelonke – wakha i-ebanzi, 1.6 ikhilomitha eside, state-of-the-art campus wezokwelapha e Devichye Pole, phakathi Garden Ring futhi Novodevichy Sezindela. Yaklanyelwa uKonstantin Bykovsky (ru), odokotela inyuvesi efana Nikolay Sklifosovskiy futhi Fyodor Erismann elalixhumanisa. emagcekeni, nemfundo yezokwelapha ngokuvamile, bahlukaniswa eyunivesithi 1918. Njengoba of 2015 Devichye Pole siqhutshwa I.M ezimele. Sechenov Okokuqala Moscow State Medical University futhi nezinye izikhungo ezehlukene zikahulumeni nezinhlangano ezizimele.
Izimpande umfundi izibhelu ukufinyelela ezijulile 1800s. Ngo 1905 inhlangano yezenhlalakahle-yeningi sekukhona eyunivesithi wabiza kokugumbuqelwa Tsar futhi ukusungulwa republic eRussia. Uhulumeni Tsarist ezisengozini ngokuphindaphindiwe ukuvala inyuvesi. Ngo 1911, e umbhikisho phezu isingeniso amabutho ungene emagcekeni nokuphathwa kabi oprofesa ezithile, 130 ososayensi kanye noprofesa washiya isikhundla sakhe eziningi, kuhlanganise abanegama ezifana Nikolay Dimitrievich Zelinskiy, UPyotr Nikolaevich Lebedev, futhi Sergei Alekseevich Chaplygin. Izinkulungwane abafundi zaxoshwa.
Ngemva Okthoba Yenguquko 1917 siqala lesi sikole ukuvuma sabasebenzi abancane kanye nabalimi abancane izingane. Ngo 1919 eyunivesithi ezaqedwa ukufundisa Imali, futhi isikhungo wokulungiselela yamiswa ukuba isize zokusebenza kwekilasi izingane ulungiselela yokungena izivivinyo. Phakathi ukuqaliswa kukaJoseph Stalin Okokuqala Five-Year Plan (1928-1932), Gulag izingxenye iziboshwa esakhiwe nyuvesi. Stalin ayeyokwenza kamuva Okuxakayo bhinqa, cindezela, futhi bazibophe le intelligensia.
Ngemva 1991 amandla amasha ayisishiyagalolunye Kwamiswa. Ngo 1992 eyunivesithi yazuza isimo esiyingqayizivele: it is uxhaso ngokuqondile isabelomali isimo (ngokudlula Ministry of Education), esihlinzeka ezingeni abalulekile ukuzimela.
ngoSepthemba 6, 1997 umculi French electronic Jean Michel Jarre, ubani imeya baseMoscow ezimenywe ngokukhethekile ukuthi enze, esetshenziswa wonke phambi inyuvesi njengoba okwenza for ekhonsathini. I frontage wakhonza njengephayona projector screen giant, kuyilapho kuqhunyiswa iziqhumane zokudlala,lasers, futhi searchlights bonke umkhankaso kusukela amaphuzu ahlukahlukene emhlabeni isakhiwo. Isigaba wema ngqo phambi kwesakhiwo, kanye ekhonsathini, osesikhundleni “The Road To The 21st Century” eRussia (kodwa uqambe kabusha “Oxygen EMoscow” ngoba umhlaba wonke isiqophi / DVD ukukhululwa) bakhangwa isixuku emhlabeni irekhodi 3.5 abantu abayizigidi ezingu-.
Kusukela 1953, iningi amandla aye elisoGwini Sparrow Hills, eliseningizimu-ntshonalanga eMoscow, 5 km ukusuka edolobheni. Lesi sakhiwo esikhulu kwadalwa wezakhiwo Lev Vladimirovich Rudnev. Ngo kuqala inkathi yangemva kwempi, omkhulu kwemibhoshongo uJoseph Stalin orderedseven tiered neoclassic ukuba zakhelwe azungeze umuzi. Yakhiwa usebenzisa Gulagor zabasebenzi, njengoba abaningi kukaStalin Omkhulu Ukwakhiwa Projects eRussia. Kutholwe ezisemaphethelweni eMoscow ngesikhathi ukwakhiwa yayo, indawo isakhiwo main manje cishe ingxenye-ndlela phakathi edolobheni laseMoscow ngesikhathi ezibiyele futhi yemikhawulo ekhona njengamanje leli dolobha. UMnyango Journalism manje ithatha indawo nyuvesi soqobo yedolobha eMoscow ngaphesheya Manezh, izinyathelo kusukela ezibiyele nezinye izakhiwo zikahulumeni. Ngempela, njalo umfundi izibhelu, kuhlanganise imibhikisho yasemgwaqweni, kahle zangaphambi ukuphola 1917 kungase kube esinye isizathu esenza ukuba abahleli kukaStalin sited nyuvesi ngaphesheya koMfula eMoscow, kwaze kwakude.
I MSU isakhiwo main laliwukuphela kwesakhiwo ezinde kakhulu emhlabeni ngaphandle kwe-New York City ngesikhathi ukwakhiwa yayo, futhi kwaqhubeka Isakhiwo esiphakeme kunazo zonke e-Europe kuze 1990. Umbhoshongo esimaphakathi 240 m abade, 36 izindaba eliphezulu, futhi lalizungezwe sinamaphiko amane enkulu umfundi kanye ubuhlakani zokulala. Kuthiwa aqukethe ingqikithi 33 emakhilomitha imihubhe futhi 5,000 amakamelo.
Facilities zitholakale ngaphakathi esakhiweni zihlanganisa ihholo ekhonsathini, netiyetha, emnyuziyamu, imisebenzi yokuphatha, umtapo wezincwadi, swimming pool, isiteshi samaphoyisa, eposini, ilondolo, salon wezinwele sika, canteens eziningana, Amahhovisi ebhange kanye ATM, izitolo, cafeterias, umpheme ibhomu, njll. Kanye ekuphathweni inyuvesi, Museum of Earth Sciences futhi ezine kwalelo khono main - Faculty of Mechanics kanye ne-Mathematics, Faculty of Geology, Faculty of Geography, futhi Faculty of ocolekile Performing Arts - manje enihlala isakhiwo Main. Inkanyezi phezulu umbhoshongo inkulu ngokwanele ukuba zihlanganisa ekamelweni elincane kanye nesigcawu ukubukwa; isisindo saso singamakhilogremu 12 amathani. mbumbulu isakhiwo BakaJehova ornamented nge amawashi giant, eziyobonisa, thermometer, eziqoshiwe, ezibaziweyo kakolweni izithungu, futhi crests Soviet. Kusobala phambi ithala obonisa eziqoshiwe abafundi besilisa nokubuka wekusasa nangekutetsemba esikhathini esizayo.
Ngenkathi Sparrow Hills ayesezibhebheni omuzi ngesikhathi lo kwakhiwa isakhiwo esikhulu, abayikho manje maphakathi kusukela ezibiyele ukuze imikhawulo idolobha. Eziningana nezinye izakhiwo nezindawo zemidlalo Kamuva wanezela kuya campus, kuhlanganise enkundleni baseball kuphela eRussia. Okwamanje, isakhiwo esisha kusakhiwa ngokuba social sciences amandla, futhi enye entsha usayizi enkulu lisanda eyakhelwe umtapo, okungukufa kwesibili-esikhulu kunazo zonke eRussia by volume (Inani lezincwadi). Le nyuvesi Ubuye eziningana izakhiwo ehostela e-Southwest eMoscow, ngaphandle campus.
Lesi sakhiwo engokomlando Mokhovaya Street manje ikakhulukazi iyisonto Faculty of Journalism, Faculty of Psychology, futhi Isikhungo Izifundo Asian Afrika. Le nyuvesi kuhlanganisa eziningi ubuhlakani izakhiwo etholakala eduze Manege Square phakathi edolobheni laseMoscow kanye nenombolo ye esewonke phesheya e-Ukraine, Kazakhstan, Tajikistan futhi Uzbekistan.
umtapo wolwazi oyinhloko wale nyuvesi ingenye esikhulu kunazo zonke eRussia. Izibalo zamuva ukuphakamisa abaqukethwe cishe 9,000,000 imiqulu. Umtapo ukhonza endaweni 55,000 abafundi ngonyaka, usebenzisa cishe 5,500,000 amabhuku.
Inyuvesi inikeza amakilasi on campus zako ezisemqoka hhayi kuphela e Moscow, kodwa futhi ku amakhampasi Armenia, Ukraine, Kazakhstan, Azerbaijan Uzbekistan. Lezi zihlanganisa campus Puschino MSU, Podmoskovny MSU campus, Chernomorsky MSU campus kanye Kazakhstan MSU campus. Igatsha Ulyanovsk ka MSU kwaba ihlelwe kabusha zibe Ulyanovsk State University e 1996.
Uyafuna xoxa eMoscow State University ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
Moscow State University kumephu
Izithombe: Moscow State University Facebook ezisemthethweni
Izibuyekezo eMoscow State University
Joyina ukuxoxa eMoscow State University.